Gị ka ị na-ekwu - ysmụ nwoke Lovehụnanya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Nke Gi Ikwu
Nke Gi Ikwu nkezi 4.4 / 5 si 64
51st, o nwere ihe nlere 187.3K
Shounen Ai, Weebụ
Ọ dịghị ihe nzuzu na-eme Jooin. Ọ bụ naanị nwa akwụkwọ kọleji gị, na-agbada isi ya ma na-efe n'okpuru radar. Yahwi, n'aka nke ọzọ, na-ada nwụrụ anwụ ọmarịcha, ibu ewu ewu… kamakwa ọ dị ka pụtara. Yabụ kedu ihe kpatara obi onye campus jiri nwee mmasị na mmadụ niile? A ga-enwerịrị ebumnobi na-ezighị ezi… mana ọ siri ike ilekọta anya mgbe ndị ahụ na-egbu egbu na-ele anya. Jooin ọ ga - abụ ohu nye ọchịchọ ya? Ma ọ bụ ikekwe ọ ga-abụ nna ya ukwu…
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ mangaupdates
Suzu Na Shiro Na Ime Anwansi nke Lovehụnanya
Ngwa malite (Harumi Chihiro)
Njikọ - Boku Nye Kimi No Aida